आखिर किन गाईको पेटमा प्वाल पार्छन् अमेरिकी किसान ? कारण थाहा पाउनु भयो भने तपाइँ पनि चकित पर्नु हुन्छ ! – Sidha Post 24
अमेरिकी किसानहरुले यसरी निकै डरलाग्दो गरी गाईको पेटमा प्वाल पार्ने गर्दछन । किन यसरी पसुलई दुख दिएका होलान यी अमेरिकनले भनेर बुझ्दै जाँदा यो त नयाँ र अचम्मको प्रविधि पो रहेछ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
यसले मुख्यगरी गाईका लागि कुन खाना सबैभन्दा फाइदाजनक हुन्छ र पेटमा के-कस्ता ब्याक्टेरियाहरु छन् भनेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । गाईको शरीरमा यस्ता प्वाल जुन भागमा बनाइएको हुन्छ त्यसलाई रुमेन भनिन्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल्; क्लिक गर्नुहोला,,,
प्रचण्डलाइ पाय मार्छु : सोनीका (भिडियो सहित)
आमाको नि’धन र बुवाले नहेरेपछि पत्रीका बेचेरै पढाई खर्च , रहर होइन बाध्यता !